केमा असहमति भयो र सहमतिको सरकार चहियो रामचन्द्र बा ? - Jhilko
डा.कृष्णहरि बरालले रचना गरेको एक चर्चित गीत छ, यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी मायाँ मायाँ भन्छ्यौ...
अहिलेको देशको परिस्थिति पनि यही गीतको भावसँग मिल्दो जुल्दो छ ।
नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘बेमौसमी बाजा ।’ अनि अर्को लोकोक्ति पनि छ, ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाऊ ।’
यी गीत, तुक्का र लोकोक्ति (उखान) सँग मेल खाने गरी नेपाली काँग्रेसका एक वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै भर्खरै एक सन्देश जारी गरेको विषयलाई सञ्चारमाध्यमहरुले प्रमुखताका साथ प्रकाशन÷प्रसारण गरेका छन् ।
हो, अहिले नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोभिड–१९, अर्थात कोरोना भाइरस फैलिँदो संक्रमणको चपेटामा छ । यो टिप्पणी प्रकाशन हुँदासम्म कोरोनाबाट विश्वभरी २५ हजार जतिको मृत्यु भइसकेको छ भने छ लाख जति संक्रमित भइसकेका छन् ।
यो बेला भनेको कुनै पनि देशमा भइरहेको सरकार ढालेर नयाँ सरकार निर्माण गर्दै सत्ताको खेल खेल्ने बेला होइन । दुःख पीडा, रोग व्याधी, व्यथा, अनिकाल, महामारी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको फाइदा लिँदै कसैले पनि यसरी भइपरी आउने दुःखलाई सत्ताको भर्याङका रुपमा दुरुपयोग गरिनु हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने यो दुःखको घडीलाई आफ्नो सत्तारोहणको सुनौलो यात्रा बनाउने चेष्टा गरेको प्रस्टै हुन्छ । महामारीको यो घडीमा सरकारको जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताले यस्तो अभिब्यक्ति दिनु सायद कांग्रेसीजनका आदर्श नेता वीपी र गणेशमान सिंहको पनि अपमान गर्नु हो ! यो विषयमा काँग्रेस पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ । यसबारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा वाहिर ल्याउनुपर्छ ।
यदि कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेलले उठाएको यो विषयलाई देश संकटमा परेका बेला सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएर संकटको हल गर्नु पर्नेमा देशको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिँदै जनताको अमूल्य मतदानबाट बैधानिकता पाएको सरकारलाई विना कारण ढालेर आफ्नो सत्ताको प्यास मेटाउने घृष्टता गर्ने कुराले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तालोलुपको आरोपलाई पुस्टि गर्छ । सत्ता वाहिर कांग्रेस बस्नै सक्तैन भन्ने कुरालाई नै सावित गर्छ ।
हो, सत्ता अन्धो हुन सक्छ । तर त्यो सबै शासकहरुमा लागू नहुन पनि सक्छ । सत्तामा बसेकाहरु यदि मैमत्ता भएर देश र जनातको बिरुद्ध मनलाग्दी निर्णय गर्दै बेथिति गरेको भए प्रतिनिधिसभाका सांसद सदस्यहरुले बिस्वासको मत फिर्ता लिने अधिकार पनि सुनिश्चित छ । तर कुनै एक व्यक्तिलाई घर व्यबहार चलाउन समस्या पर्यो वा पकेट खर्च सकियो वा यस्तै यस्तै बेतुकका माग राखेर मन्त्रीमण्डलमा छिर्न मन लाग्यो भन्दैमा ‘सहमतिको सरकार’ जप्दै भइरहेको सरकार परिवर्तन हुन सक्ला ? एउटा जिम्मेबार पार्टीको शीर्ष नेताले यस्तो सस्तो माग राख्नु वर्तमान कोरोना संकटका बेला कति जायज होला ?
सरकारले कोरोना संक्रमितहरुको खोजी कार्य जारी राखेको छ । केही संक्रमित ब्यक्तिहरुको पहिचान भई उपचार भइरहेको छ । देश पूरै लकडाउनमा छ । यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले भरपुर साथ दिएका छन् । सरकारले गरेका काम र लिएका निर्णयहरुको आम जनताले स्वागत गरेकै छन् । विश्व जगतले नेपाल सरकारले कोरोनाबिरुद्धको अभियानमा चालेका कदहरुको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका छन् । यद्यपि सरकारले जति गरेको छ त्यो नै सर्वैसर्वा भने होइन । यसबारेमा सरकारले अझ दूरगामी निर्णंय गर्दै जाला ।
तर, रामचन्द्र पैडेलले माग गरे जस्तो सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने वित्तिक्कै कोरोना संक्रमण जादूको लौरी जस्तै छुमन्तर जपेझै समाधान भइहाल्ला र ? देशको शाधनश्रोत यही हो, जनशक्ति यही हो, प्रविधि यही हो, आर्थिक अवस्था यही हो, तर के सहमतिको सरकार बन्नासाथै सबै रातारात चौगुणा बढ्ने हो र ?
नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई दिने सल्लाह, सुझाव, र अन्य सहयोग त सरकार बाहिरै बसेर पनि त दिन सकिन्छ नि हैनर पौडेल बा ? यदि वर्तमान संकटलाई तपाईले सत्तामा उक्लिन भर्याङका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्नु भएको हो भने यो तपाईँका लागि मात्र होइन आम नेपाली काँग्रेस पार्टी समर्थकहरुका लागि पनि धोका हुन सक्छ । पौडेल बा को बेलैमा बुद्धि पुगोस, कोरोना रोकथाममा सकेको सहयोग जुटोस् ।
भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारीरुपमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन...